The Institute for the Study and Treatment of Pain - XHOSA Yintoni i-IMS? I-GunnIMS: Ukukhuthazwa kwe-Intramuscular
XHOSA Yintoni i-IMS? I-GunnIMS: Ukukhuthazwa kwe-Intramuscular
Yintoni i-IMS? I-GunnIMS: Ukukhuthazwa kwe-Intramuscular
XHOSA I-XHOSA / ULWIMI oluguquliwe
Eli phepha liye laguqulelwa ngokukhawuleza ngokusebenzisa iinguqulelo ze-Google, umzamo owenziwe ngekhompyutha ekuguquleleni ulwazi olubalulekileyo lwenkonzo yoluntu kuluntu. Sebenzisa ibhokisi ehlayo ngakwesokudla kunanoma yiyiphi iphepha lewebhu ukuguqulela ulwazi ngolwimi olukhethiweyo. Ukuba unemibuzo, nceda uqhagamshelane nathi ukucela uncedo. Nceda uxolele naziphi na iimpazamo zokubhala, abaguquleli bokwenene abavolontiya bavuyiswa kakhulu ; ) U
Yintoni i-Gunn IMS? I-Gunn Intuthuko ye-Intramuscular
Ukunciphisa ubukhulu kunye nokunciphisa imisipha akukwazi ukusebenza kwaye 'kunqunyulwe,' ngelixa 'iipilisi' kunye nezinye iipilisi eziphambanisayo zivutha nje intlungu (kaninzi iphosakele) kwaye ikhuthaza ukutyhafaza, ihlanganise ingxaki. I-neuropathy iphendula kuphela kwimpembelelo yamandla.
Ukuxhaswa kwe-Intramuscular (IMS) yinkqubo epheleleyo yokuxilongwa kunye nokunyangwa kwe-syndromes yeentlungu (iimeko ezibuhlungu ezingapheliyo ezenzeka kwi-musculoskelet system xa kungekho sibonakaliso esicacileyo sokulimala okanye ukuvuvukala). I-IMS isekelwe kwiNzululwazi yezoNyango eNtshona, kwaye inesiseko esiqinileyo kwisimo sayo se-radiculopathic yentlungu, ngoku ixhaswa yiingcali ezininzi endle. Yayilungiswa nguDkt. Gunn ngoxa wayedokotela kwiBhodi yeMbuyekezo yabasebenzi baseBritish Columbia kwiminyaka engama-70, apho aphanda khona inani elikhulu lamangxakini angenangqondo emva kokukhungatheka ngeendlela ezingafanelekanga. Unyango olusebenzisa izilingo ze-acupuncture ngenxa yokuba zixhobo ezikhoyo ze-intinnate ezikhoyo eziye zenzelwe ukungena ngaphakathi kwimizimba ye-muscle, ngokukodwa iithagethi ezilinzakeleyo eziye zazinikezela kwaye zancincizeka.
I-IMS ixhomekeke kakhulu ekuhloleni ngokusemgangathweni kwegulane ngumqeqeshi oqeqeshiweyo, oqeqeshwe ukuqonda iimpawu zesifo se-neuropathic. Ukuhlolwa okusemzimbeni kubalulekile kuba intlungu engapheliyo ihlala yintsholongwane ngokuchasene nesakhiwo, kwaye ngoko, ayibonakali kwii-X ray, i-MRI, i-Bone kunye ne-CT Scans. Ukungaphumeleli ukuyiqonda le miqondiso kuya kubangela ukuxilongwa okungachanekanga, kwaye ngoko ke, ukuqala kobuhlwempu kwiyeza.
Unyango lubandakanya inxanxuba eyomileyo yeendawo ezichaphazelekayo zomzimba ngaphandle kokufaka injecting nayiphi na into. Izingosi zeenaliti zingabakho kwi-epicenter ye-taut, iindidi zamathambo ezithenda, okanye zinokuthi zibe kufuphi nomgudu apho ingcambu yomnyoba ingacatshukiswa kwaye ingaphepheli. Ukungena kwemisipha eqhelekileyo ayibuhlungu; Nangona kunjalo, iifutshane, isisundu esiphezulu siya 'kuqonda' inaliti kwizinto ezinokuthi zichazwe njengento yokuqhayisa. Isiphumo sithathu. Enye, i-receptor eselulayo kwisisipha ivuselelwe, ivelise ukuphumla okuxilisayo (ekwandisa). Eyesibini, inaliti nayo ibangela ukulimala okuncinci okuhambisa igazi kwindawo leyo, ukuqala inkqubo yokuphilisa. Eyesithathu, unyango ludala amandla ombane kwisisipha ukwenza umsebenzi wesibindi ngokuqhelekileyo kwakhona. Inaliti esetyenzisiweyo kwi-IMS, ngokuvuselela izihlunu ze-muscle, ngokuyinhloko iba yinto ekhethekileyo kunye nekhethekileyo yokuxilongwa kwe-Neuropathic Muscle Pain.
Injongo yonyango ukukhulula ukunciphisa imisipha, eyenza iqhutywe kwaye icasule inzwa. Iindawo eziphakamileyo zingabonakali, kwaye ukutsalwa okuqhubekayo kwezihlunu ezincitshisiweyo kunokukhutshwa. I-IMS iphumelela kakhulu ukukhulula izihlunu ezimfutshane phantsi kwesivumelwano, ngaloo ndlela zibangele intlungu engummangaliso kwi-pull muscle. I-IMS, echanekileyo, iyayifumene nesimo sengqondo esisemgangathweni esenza intlungu. Xa kuqhutywe ngempumelelo, i-IMS inezinga eliphumelelayo lokuphumelela, njengoko libonakaliswe ngokuphuculwa kweempawu kunye nemiqondiso, nokuba yintlungu engapheliyo imva kunye nemiqondiso yeengcambu.
I-IMS ifaniswa ngandlela-thile ngeendlela zokwenza i-acupuncture; Nangona kunjalo, kukho inani lezinto ezibalulekileyo. I-IMS idinga uviwo lwezonyango kunye nokuxilongwa ngugqirha onolwazi kwi-anatomy, ukufakwa kweenaliti kuboniswa yimpawu zenyama kwaye kungekhona ngokubhekiselele kwiimeridians ezingenasayensi, ngelixa iimeko ezizimeleyo kunye neziphumo zidla ngokukhawuleza.
AMA-KEYWORDS: ukuvuselela i-intramuscular, intra-muscular, im, i-cgims, i-gunn ims, i-needling dry, i-acupuncture, i-trigger point, intlungu
Iziko leSifundo noPhando lwePain (iSTOP)
FUNDA IZIHLOKO ZOMSEBENZI - ICANDELO LOLAWULI